Hogaan Wanaagsan – Hanoolaato Somalia National Party
January 1, 2019 jamalmahmed No Comments Political hogaamiye, hogaan
Dalkeenu dadkeena maanta baahideena ugu weyn waa hogaan wanaagsan. Meesha kaliya oo aan isleenahay aad baan ugaga liidanaa maanta waa hogaanka. Hadii aan heli laheen hogaamiyeyaal fiican oo nadiif ah oo xumaan iyo damac waalan oo aan waxqabad lasocon iyo damiir xumi kafog maanta waxaan ahaan laheen amaba kamid noqon laheen dalalka ugu fiican aduunka. Waan soo daalnay muddo aad udheer ayaan dhib iyo qaxar aduunyo kujirnay war maxaa kudhacay dadkaan hogaanka dalkeena ka ah. Miyay miyir beeleen. Miyansan waxba arkin waxba maqlin wax dareen ah haba yaraatee lahayn oo kadanqanaya dadkaan dalkiina kudhiban aduunka daafaheedana kudhiban oo meel walba lagu ugaarsanayo oo badahii kubaaba’ay oo magafe marna dilayo marna kufsanayo marna iib geynayo.
Aniga ilama ahan hogaan wanaagsani in ay shukaanta inoo hayaan. Dad ayaga un isku xoog weyn ayaga un isku maqan oo marwalba ayaga un ishaysta oo isdagaalaya oo wax iska sheegaya oo sharci, diin, dhaqan iyo nidaam toona aan kadambeynin wax ay u turaayaana jirin. Siday usocotayba waxay gaartay markii aan oron lahayn waa bas anagu marabno hogaan noocaan ah.
Waxaan leenahay intaydaan dalka iyo dadka kale sharciyo usameynin bal idinku sharciyo sameysta aad wax ku kala qeybsan lahaydeen oo wax ku wadaagi laheydeen oo hadii midkiin wax khaldo aad kula xisaabtami laheydeen. Sharci aan hogaamiyuhu uhogaansanayn qof u hogaansamaya maleh taas ogaada oo sifiican haidin kadhaadhacdo hadii aydsan maskaxdiina taas qaadi wayso orda oo iscasila oo boosaska aad haysaan ubaneeya kuwo 20 sano idin kayar ayagaa instaas garanayee.
Maanta Soomaaliya waxay ubaahan tahay hogaamiyeyaal diyaar u ah in ay dowladnimada toosiyaan meeshay ka liicdo, dhisaan meeshaysan kadhisnayn. kabaan meeshay kaburburtay oo diyaar u ah in ayaga tusaale unoqdaan ummadda kale oo kadhaqaale yar oo kadhib badan hadana ay diinta iyo dhaqankeena suuban udiidayo in ay xadgudubyada aad sameynaysaan sameeyaan oo xargo adadag isku haya. Waxaan rabnaa hogaamiyeyaal aan wixii loo dhiibto xadayn, oo awooda lasiiyay si ay cadowga nagaga difaacaan aan nagulasoo jeesan anaga oo si sharci daro ah u adeegsan. oo aan ayaga un isku maqnayn oo og in ay dad soo dirsadeen waxna kasugaayaan ayagoo waliba aad ubaahan.